Ilekọta ejula na ahaatin n'ụlọ bụ ọdịnaya, gịnị ka ị ga-eri?
Na-eche maka nkwụsị na ahaatin n'ụlọ - ihe nzuzo na nuances nke ọdịnaya
Nlekọta nlekota nke oma site na aha ahiri n'ulo bu isiokwu di mkpa nye ndi huru anu ulo. A na-ewere amara ndị a dị n'Africa dị ka ndị kachasị na mollusks, nwee ọkpụkpụ ruo 25 cm n'ogo, obi, akụrụ, ọkụkọ, ụbụrụ ma nwee mgbanwe nke ọnọdụ. Ha dị oke egwu, ma a ghaghị ịhụ ọnọdụ ụfọdụ mgbe ha na-elekọta ha.
Ahatines - ọdịnaya
Ogwurugwu akuku nke Akhatina - ala, nlekọta na nlekota na ulo adighi acho otutu nsogbu. Ọtụtụ aquarists na-eche na ha bụ ezigbo anụ ụlọ. Akhatin adịghị esi ísì, ọ naghị aru, ọ naghị eme ka ahụike , ọ dịghị achọ nkwurịta okwu ma na-eje ije, ọbụna na oge ezumike ma ọ bụ njem azụmahịa ị pụghị ichegbu onwe ha - nkwụsị ahụ ga-adị mfe ịnọ naanị otu izu ma ọ bụ abụọ.
Kedu ihe ị ga-eme iji gbasaa ngwa ngwa?
Maka nlezianya dị mma na nhazi na ụlọ, a chọrọ ka akpa akpa. Ngwa dị mma:
site na plastic;
site na Plexiglas;
akpa mmiri akwari mmiri.
Iji mee ka okpukpu ahụ nwee ntụsara ahụ, ihe mkpuchi akpa kwesịrị ịbụ ma ọ dịkarịa ala lita 10, ọ bụrụ na ezinụlọ na-ebi ndụ na ya, ọ pụtara ihe ndị ọzọ. Iji nweta ikuku ohuru, a ghaghị iji terrikan na-eji elu oghere nwere obere oghere, ebe onye obibi ahụ agaghị enwe ike ịgbanahụ ya. Lezie anya ka ejula aha na homeatin - karịa jupụta akpa ahụ:
A na-ekpuchi ala ya na akwa akwa nke 10 cm elu, compost floral ma ọ bụ dị ọcha peat kwesịrị ekwesị. N'ime ya ị nwere ike itinye aja, hazelnuts ma ọ bụ isi nke walnuts. A chọrọ mkpụrụ osisi ahụ ka agwọ ahụ wee bamie n'ala - ha na-achọ ime ya, dina nsen n'ebe ahụ. A ghaghị ịsị fatịlaịza site na egbe égbè kwa ụbọchị.
Na mgbakwunye na aquarium ị nwere ike itinye nnukwu nkume, snags, nkwụ nke aki oyibo - agwọ ahụ ga-ezo n'ime ha. Green vegetation (fern, ivy) ga-eme ka akụkụ ahụ dị ndụ mma, ọ ga-abụrụ ndị bi na ya nri bara uru.
N'ime ite ahụ, tinye onye na-enye ihe ntanetị na mpaghara dị ala na otu iko mmanya na-eme ka mkpuchi plastic.
Okpomọkụ maka mmezi nke azu
Ihe gbasara Afrika na nlekọta na nlekota na ulo nwere obi iru ala na 20-30 Celsius C na iru mmiri nke 80-95%. Ọnọdụ ndị dị otú a dị nso na gburugburu ebe obibi ha. Ọrụ nke mollusc dabere na ìhè anyanwụ, iru mmiri na okpomọkụ. Ha na-apụ maka ịgagharị ọtụtụ abalị ma ọ bụ n'oge mmiri ozuzo. Ọ bụrụ na ụyọkọ ahụ na-arịgo mgbidi - ọ pụtara na ụlọ ha nwere oke iru mmiri, zoo n'ime ala - nnọọ akọrọ. A gaghị etinye igbe ahụ kpọmkwem na ìhè anyanwụ ma ọ bụ nso ngwaọrụ ihe ọkụkụ.
Na-elekọta Ahatin n'ụlọ
Egwu Akhatina a na-atụghị anya ya mgbe ọ nọ na-enye nwa ara, na mgbakwunye na ịnọgide na-enwe oke okpomọkụ na iru mmiri dị ọkụ, chọrọ ihicha mmiri akụrụngwa, nri ziri ezi, na-elekọta n'oge ịzụlite nke mollusks. E kwesịrị ilebara nlezianya anya na azụ anụ ụlọ anya - ọ bụ nchedo ya pụọ ​​na ọrịa na mgbu ndị ọzọ. Mgbe ị na-elekọta agwọ na ahaatin n'ụlọ, ị nwere ike ịhazi usoro mmiri maka ha:
Tinye saa na terrarium na mmiri oyi, e kwesịghị inwe nnukwu mmiri na ya.
Na-edozi ịsa ahụ ọkụ maka ụmụ akwụkwọ, na-ejide ha n'aka ntancha maka ihe dị ka minit 3.
Na-eche maka nkwụsị na ahaatin n'ụlọ - nhichapụ terrarium:
A kpochara akpa ahụ ugboro 2-3 na ọnwa 3.
Nhicha na-agụnye ịsacha zuru oke ma dochie mkpụrụ.
Ọ bụrụ na a na-ekpuchi mgbidi nke akwari mmiri ahụ (a na-ahapụ ya na celiac) ma ọ bụ na-anụ ísì na - adịghị mma - ọ ga - adị mkpa ka ịmechaa nhicha.
Na-elekọta Ahatina na oyi
Aha nnukwu Ahaatin mgbe ị na-azụ nwa ma na-edebe oge oyi chọrọ nlebara anya pụrụ iche. Na oge oyi nke afọ, na mmiri dị ala na enweghị oke iru mmiri na terrarium, mollusc nwere ike ịdaba na nkedo - mkpuchi, mgbe a na-ekpuchi shea na ihe nchebe. Ọtụtụ ndị na-azụ atụrụ adịghị akwado ikwe ka ihi ụra nke aha oge maka ihe karịrị ọnwa 2, ma ọ bụghị ndị ọzọ nwere ike ịnwụ.
Maka ụmụ anụmanụ na-eto eto, anabiosis na - emerụ emerụ - ha nwere oge na-eto eto na mkpa iri nri nke ọma. Iji teta anụ ụlọ, ọ na-atụ aro ka ijide ya n'okpuru mmiri iyi ọkụ ma ọ bụ ka ịsaa ya. N'ime nkeji ole na ole, ya onwe ya ga-agbawa ihe nchebe ahụ ma pụta ìhè. Iji gbochie nkwụ ahụ pụọ na-ekpo ọkụ, ụlọ kwesịrị inwe okpomọkụ na iru mmiri.
Akhatin - na-elekọta sink
Nnukwu Snails AhaTinam na-elekọta maka shea mkpa a pụrụ iche, ịkwesịrị ịṅa ntị n'ihe ndị na-esonụ:
Maka ezi uto na mmepe, mollusc kwesịrị ịnata calcium zuru ezu. Ma ọ bụghị ya, nwatakịrị ahụ nwere ike ịmalite inwe nsogbu na shea - ọ ga-amalite ikewapụ, ghọọ nke na-emebi emebi, na nkwụsị n'onwe ya agaghị eru oke ibu nke ọ bụ nke a ma ama. Calcium dị mkpa nye onye bi na ya ma ọ bụrụ na ọ dị ime ma ọ bụ shea mebiri emebi. Dị ka ihe mgbakwasị n'elu na-eji nzu, ala ma ọ bụ sepia - nkume ịnweta maka nnụnụ.
Nsogbu ọzọ a na-ahụkarị bụ ọnyá na-agba agba ma gbajie. Mgbe ụfọdụ, mkpuru mmiri nke na-agagharị n'elu ọnụ elu nke ụlọ ahụ daa, nke nwere ike iduba na shea. N'okwu a, ọ dị mkpa iji na-emeso mpaghara ahụ mebiri emebi na onye na-agwọ antiseptic na ịtọba anụ ụlọ ahụ na arịa dị iche iche ka ọ ghara ichegbu onwe ya banyere ndị ikwu ya (akhatin likes to do it).
Azụ nke Ahatina - lekọta
Na-elekọta nlekọta maka ejiri na ahaatin n'ụlọ, ọ dị mkpa ka ị mara na ndị mollusks ndị a bụ ndị na-akpọ ya. Onye nke ọ bụla nwere ma ọ bụ nwoke na nwanyị nwoke na nwanyị, na mgbe ha ruru afọ 6-7, ha nwere ike ịmụba. Maka mkpụrụ, a na-etinye ndị okenye n'otu arịa dị iche iche otu izu. Ndị na-emepụta ihe na-eme ka ọ bụrụ ọbara, a na-akwaba àkwá n'ala dịka izu abụọ mgbe mating. N'otu oge, ikuku nwere ike ịnwe nsen 50-400. Ha size bụ 4-5 mm, ke udi ha yiri ọkụkọ.
Ọtụtụ ndị na-azụ atụrụ na-elekọta ihe a na-emepụta ihe dị iche iche. Ha na-etinye ha n'ime plastik plastic n'ime ihe a na-ekewapụghị ekewa ma kesaa 1-2 cm nwere ala ala ka ndị okenye na-egwu egwu ghara imerụ ụmụ ha. Mkpụrụ na mgbidi nke ụgbọ ahụ ga-ekpochapụ kwa ụbọchị, akpa ahụ kpuchie ya. Mmepe nke àkwá na-eme n'oge okpomọkụ nke 25-27 Celsius C na iru mmiri nke 70%, ọ dị mkpa ka ọ ghara ikwe ka mgbanwe na ụkpụrụ ndị a.
Nwa nwa ọhụrụ nke ahaatin - elekọta
Nwa ọhụrụ nke nwa ọhụrụ nke Afrika, bụ onye a na-azụkọta aka ya na ọnọdụ okpomọkụ dị jụụ, a mụrụ ya otu ọnwa mgbe njikọta spam. Shea nke àkwá ahụ dị mkpa, ihe niile calcium si na ya ga-aga ịkpụ shea nke ụmụ akwụkwọ. N'ime usoro ọmụmụ, mollusk na-ekewa ma na-anwa isi n'ala. N'otu oge ahụ, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịkwanye ala gburugburu ụlọ ahụ iji nyere nwa amụrụ ọhụrụ aka ịpụ. Ụbọchị ole na ole mbụ nke snail na-eri ihe fọdụrụ na ha.
Obere obere ihe - nlekọta
Ụkpụrụ ndị bụ isi nke nlekọta akhatin bụ obere:
Ụlọ obibi oge maka ịmị nwa ọhụrụ nwere ike ịbụ ihe oriri maka 8-10 lita, nnukwu ụlọ ha na-adịghị mkpa.
Na mkpuchi nke akpa a ga-enwe oghere iji nweta ikuku n'ime.
N'ime ọnwa ole na ole mbụ, ọ ka mma itinye temometa na hygrometer n'ime akpa ahụ. Igwe kachasị mma nke obere ahaatin bụ 25-27 Celsius, iru mmiri - 65-70%.
Iji nọgide na-enwe okpomọkụ a chọrọ iji nyere ọkụ ọkụ, na iru mmiri - ịgba.
Maka obere ohatine, ala na-eje ozi site na kabeeji nwa ehi na letus. Ọ bụrụ na ha bi na terrarium na mkpụrụ, mgbe ahụ, a ga-enyefe ala ifuru, ncha oyibo. A machibidoro Moss, ájá, ájá na nkume.
Itinye akpa ahụ na ụmụ gị ka mma ma ọ bụ akwụkwọ, ọ bụghị na windo.
Kedu ka ị ga - esi na - eri nri ahụ?
Site n'ilekọta nkedo Afrika na ahaatin n'ụlọ, ọ dị mkpa ka ha na-azụ ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị na n'oge iji mee ka azụ azụ na-etolite ahụike ma ghara ịda ọrịa. Ihe oriri ha kwesịrị ịgụnye ihe oriri osisi, ihe oriri na-edozi ahụ na protein anụmanụ. Akhatin - nri kwesịrị ekwesị ma na-elekọta:
Ihe ndabere nke nri: akwụkwọ nke letus, dandelion, plantain; ụdị greenery; Ome akwụkwọ nri na ọka.
Akwụkwọ nri: cucumbers, spinach, ugu, carrots, zucini, tomato, peas.
Mkpụrụ osisi na tomato: apụl, pears, watermelons, melons, unere, apricots, plums, strawberries, raspberries, cherị.
Ndị na-edozi: puree nke anụ anụ, nri azụ, anụ na ọkpụkpụ nri, sie akwa.
Ngwongwo n'elu ihe ntanetị: fodder chalk, eggshell, obere oporo, ihe oriri pụrụ iche maka anụ ufe, sepia.
E nwere ọtụtụ ngwaahịa ndị a machibidoro ịnye agwọ. Ihe ize ndụ mmadụ maka ha bụ nnu. Anyi aghaghi ijide n'aka na n'ime odidi ya di nma ma buru ibu, o ruteghi ha na nri. A machibidoro ịnye ihe oriri dị ụtọ, ihe ụtọ, nri anwụrụ ọkụ ma ọ bụ acidic, ihe oriri e ghere eghe. Site na macaroni, raw poteto na mkpụrụ citrus, kwa, ga-atụfu ya, nke ikpeazụ enweghị mmetụta dị mma na sheba nke anu ulo.
Kedu ihe ị ga-eri nri na oyi?
N'oge oyi, nri nke shellfish ekwesịghị ịbụ obere. Oge oyi na-agụnye: flakes oat, wheat bran, tinye na mmiri ara ehi. Tụlee menu na unere, beets, carrots. Ọtụtụ n'ime ndị na-azụ anụ maka nsị na windowsills na-eto akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nke a na-ere na ndị veterinarians maka nwamba. Ọtụtụ ndị amaghị ma ọ ga-ekwe omume iji nri na-eri nri na-eri nri. Azịza ya agaghị ekwe omume, nnu nwere mmetụta dị njọ n'ahụ ahụike nke anụ ụlọ. A ga-eji ndị na-ekpo oyi na-edozi akwụkwọ nri pickled site na nnukwu ụlọ ahịa ahụ, na-agbagha ha tupu ha eri nri;
Karịa iji zụọ obere ọkụ ọkụ?
Ihe di mkpa nke igbochi Afrika, Akhatin, na-egosiputa nri zuru oke nke umuaka. Esi na-eri nri obere:
Ụbọchị ole na ole mbụ mgbe a mụsịrị nwa, ha na-ejide ụfọdụ epupụta nke salad, fesa ya na egghell ma ọ bụ nzu.
N'ime izu n'izu nri nke ụmụaka kwesịrị itinye okpokoro sliced, grated vegetables, calcium na ọka mix, ala na grinder.
Ihe omuma ha choro itolite na mpeepe mara mma. Ngwurugwu akwukwo nri ga - enyere aka na - eme ngwa ngwa.
Site n'izu nke abụọ nke ndụ na menu, ị nwere ike itinye protein protein.
Malite site na ọnwa ọgbọ, obere mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri na-edochi ya.
Ugboro ole ka ị ga-eri nri?
Ọ bụrụ na ụlọ ahụ nwere ihe dị n'Africa, a ghaghị ime nri na ilekọta ya n'ụzọ ziri ezi. Na-eri nri na mgbede, n'ihi na ndị mollusks ndị a bụ ihe ndị dị n'abalị ma n'anyasị ha na-arụsi ọrụ ike. Maka ndị okenye, otu nri kwa ụbọchị zuru ezu, a na-enyekwa ya ohere inye ha nri n'otu ụbọchị. Ọ dị ndị na-eto eto mkpa inye nri na-elekere anya na nri. E kwesịghị itinye nri n'elu ala, nke mere na ọ dịghị ejikọta ya na mkpụrụ ahụ ma ghara ịda mbà, ọ gaghị ekpuchi ya na ebu. Maka nri, ị ga-eji nnukwu efere, ma ọ bụ, n'ọnọdụ dị oke njọ, akwukwo letus.
Enwere ike ịsacha oke bekee - iwu nke idebe ihe ọcha nke ụmụ anụmanụ
Lelee nkịta ahụhụ
Agba nke nwamba nke Sphinx
Kedu esi eme pusi na nwa anu?
Vitamin maka ụmụ nwa
Mmiri ozuzo maka nkịta
Esi na-eri oke ogugu n'ulo?
Nnukwu pusi kachasị n'ụwa
Ogologo maka umu nwa
Nwa nkita nwere afọ ọsịsa
Ọrịa aquarium azụ - ihe ịrịba ama na foto
Ogbugbu obi na - esi ike - nsogbu, ohere inweta ndụ
Mgbagwoju anya n'ime ime
Kedu ka esi esi kporo anụ azụ?
Mgbochi syphilis - ụzọ niile nwere ike isi zere ọrịa
Ezigbo nri dị ụtọ na tebụl oriri
International Day nke blogger
Tkemali si cherry piom maka oyi - uzommeputa
Ndị na-egwu egwu na multivariate
Kedu otu esi eme ka etiti oge?
Ma-spa - contraindications
Ultrasound nke akpanwa na appendages
Inoculation nke osisi osisi
Gịnị mere nduru ji abịa na mbara ihu ahụ?
Tracksuits maka ụmụ agbọghọ
Otu ụbọchị nke nwatakịrị nwere onye England nanny
Kedu ka esi akpọ mmụọ?
Kedu ihe bụ ịkpa ókè - ụdị ya, isi ihe na otu esi emeso ịkpa ókè?
Nyochaa akwụkwọ "Gịnị mere?" - Catherine Ripley